ဗုံးကွဲမှုကို မကျေနပ်သဖြင့် မြန်မာ - အိန္ဒိယ ဝင်ပေါက်များကို မိုးရေးသူများ ပိတ်ဆို့ | ဧရာဝတီ
ကြယ်ပြာ| January 17, 2013 | Hits:2,495
7 | | အိန္ဒိယ – မြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်း မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ကောင်းညီဟန်/ ဧရာဝတီ)
အိန္ဒိယနယ်စပ် မိုးရေးတွင် ဗုံးဖောက်ခွဲခံရမှုကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော မိုးရေး ဒေသခံ အမျိုးသမီးများက မြန်မာဘက်မှ လူများ အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းသို့ မဝင်ရောက်နိုင်ရန် အ၀င်အထွက် တံခါးများအား ခုံတန်းရှည်များဖြင့် ၃ ရက်ကြာ ပိတ်ဆို့ ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပိတ်ဆို့မှုများကို ယနေ့နံနက်တွင် ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်သော်လည်း မြန်မာဘက်ခြမ်းမှ လူအများစုမှာ အဝင်အထွက် မပြုလုပ်ရဲသေးပေ။
မိုးရေး၌ နေထိုင်သော ကွတ်ကီး (ချင်း) လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ လူတဦး၏ အိမ်ကို ၁၄ ရက်နေ့က လက်ပစ်ဗုံး ၂ လုံးဖြင့် လာရောက် ဖောက်ခွဲသွားသူ တဦးသည် မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်းသို့ ၀င်ရောက် ထွက်ပြေးသွားသည့်အတွက် အဝင်အထွက် ဂိတ်ကို ပိတ်ဆို့ ခဲ့ရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာပြည်ဘက်အခြမ်း နန်းဖာလုံဈေးမှ ဈေးသည်များက ပြောသည်။
အဆိုပါဗုံးသည် နေ့လယ် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တကြိမ်၊ ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တကြိမ် ပေါက်ကွဲခဲ့သော်လည်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရသူမရှိကြောင်း သိရသည်။
“တံခါးတွေမှာ တုတ်တွေနဲ့ စောင့်နေတဲ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ မရှိတော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယဘက်က ကုန်သည်ကြီးတွေ မလာတော့ ဈေးက အရောင်းအ၀ယ် မရှိဘူး၊ ပျံကျဈေးသည်တွေလောက်ပဲ အလုပ်ဖြစ်တယ်”ဟု နန်းဖာလုံဈေးမှ အ၀တ်အထည်ဆိုင် ပိုင်ရှင် မသီတာက ပြောသည်။
အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာအစိုးရ နှစ်ဘက်လုံးက နှစ်နိုင်ငံ ၀င်ပေါက်တံခါးများအား တရားဝင်ပိတ်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း မိုးရေးဘက်သို့ ၀င်ပေါက် တံခါးမကြီးနှင့် ခိုးဝင်နိုင်သည့် အပေါက်များအား ခုံတန်းရှည်များဖြင့် ပိတ်ဆို့ကာ တုတ်ရှည်များ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် အမျိုးသမီးများက စောင့်ကြပ်နေခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာဘက်မှ ၀င်လာသူများအား တုတ်များဖြင့် ရိုက်နှက်သည့် အတွက် ထွက်ပြေးရသူများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂိတ်ပိတ်ဆို့ထားသည့် ၃ ရက်တာအတွင်း ယခုကဲ့သို့ ပြဿနာများ ဖြစ်နေသော်လည်း နှစ်ဘက်အစိုးရက မည်သည့် လုံခြုံမှုမှ မပေးကြောင်း၊ မိုးရေးဘက်တွင် နေ့စဉ် အလုပ်သွားလုပ်သည့် လူများလည်း မသွားရဲသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းနှင့် နန်းဖာလုံ ဈေးကိုလည်း ပထမနှစ်ရက်တွင် နေ့လယ် ၁ နာရီအထိ ဖွင့်ခဲ့ပြီး ယမန်နေ့က ပိတ်ထားခဲ့သည်ဟု တမူးဒေသခံများက ဆိုသည်။
ဈေးပြန်ဖွင့်ပြီဆိုသော်လည်း တင်းမာခဲ့သော အခြေအနေများကြောင့် မဖြစ်မနေ ကုန်စိမ်းသယ်သည့် ပျံကျဈေးသည်များမှ လွဲ၍ ကုန်သည်များမှာ မိုးရေးဘက်သို့ သွားလာကြခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
တမူးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ဧရာဝတီမှ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖုန်းကို လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်စခန်းတွင် ကွတ်ကီး (ချင်း) လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊ ကသည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အိန္ဒိယ အစိုးရတို့ မကြာခဏ အပြန်အလှန် သေနတ်ပစ်ဖောက်မှုများ ဖြစ်ပွားသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ပါဝင်လာပြီး အရပ်သားများအား အန္တရာယ်ပြုမှုမျိုးမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“တမူးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်လေ၊ အခုက မိုးရေးဘက်က လူကကျတော့ မြန်မာဘက်ကို အလွယ်ဝင်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့တတွေ ကျတော့ သူတို့ဆီကို ၀င်မရဘူး၊ မတရားလိုက်တာဗျာ”ဟု တမူးမြို့နယ် လူငယ်ကွန်ယက် အဖွဲ့တာဝန်ခံ ကိုယဉ်ကိုဦးက ပြောသည်။
မိုးရေးဈေးသည် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံ မဏိပူရ်ပြည်နယ်၌ ရှိပြီး မြန်မာပြည်ဘက်မှ တင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းများကို အဓိက အားထားနေရသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှအစ ကုန်ခြောက်များ၊ ဆန်များကို အိန္ဒိယက ၀ယ်ယူ နေခြင်းဖြစ်သည်။
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များသည့်အလျောက် နှစ်ဘက်အစိုးရ၏ အားနည်းချက်များ ရှိနေပြီး နန်းဖာလုံဈေးတွင် ဆိုလျှင် မြန်မာဘက်၌ လာရောက်ခိုလှုံနေသော ကသည်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ ဆက်ကြေးတောင်း ခံရမှုများ ရှိနေကြောင်း၊ အိန္ဒိယမှ လာသော ကုန်သည်အကြီးစားများထံမှလည်း ငွေကြေးအများအပြား တောင်းယူခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းများ ပြုလုပ်သည့် အတွက် အရောင်းအ၀ယ်တွင် အခက်ခဲများကြုံတွေ့ရကြောင်း နန်းဖာလုံ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ကသည်း လက်နက်ကိုင်များက မြန်မာဘက်မှလူများ၏ နေအိမ်များကို ဖိအားပေး၍ ငှားရမ်းနေထိုင်ကြပြီး ၎င်းတို့ အဖွဲ့အချင်းချင်း ပစ်ခေတ်မှုများကြောင့် ကသည်းများ သေဆုံးခဲ့ပါက မြန်မာအစိုးရမှ အိမ်ရှင်အား တရားစွဲဆို ထောင်ချမှုများ မကြာခဏ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
ချင်းအမျိုးသား ညီလာခံကျင်းပရန် ချင်းပါတီ ၅ ခု ဆွေးနွေးကြမည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ကို ခိုင် January 17, 2013 - 9:57 pm	အထက်ပါပြသနာများ အားမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ လက်ရှိမ်ြန်အစိုးရမှ တဘက်နိုင် ငံက သောင်းကြမ်းသူ ကသည်းသူပုန်များနေအား နည်းမျိုးဆုံနှင့်ကာကွယ်ပေးပြီး ၊နေရာပေးသည့်အပြင် ထို က သည်း သူပုန်များအားနိုင်ငံသားမှတ်ပုံသင်ပါထုတ်ပေးပြီးဖြစ်သည်။
ထို့ ပြင် ကသည်းသူပုန်များသည် ငွေကြေးရဖို့ နည်းမျိုးဆုံနှင့်လှုပ်ရှားကာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၏ ကာကွယ်မှူဖြင့် ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှူများတွယ်ကြယ်စွာ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား နည်းမျိုးဆုံနှင့်ဖျတ်ဆီးနေပြီး သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ ၄င်း လုပ်ရပ် များ အားလစ်လျိုရှို. သည့်အပြင် ၄င်းကသည်း သောင်းကြမ်းသူမားနှင့် ဒေသခံများ ပြသနာ တစုံတရာရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများသည် မိမိနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားများအားကာကွယ်မည့်အစား တဘက်နိုင်ငံမှ ခိုလုံလာသည့် သောင်းကြမ်း သူများ ဘက်သို့အမြဲ တန်းကာကွယ်ပေးနေပါသည်။ မိမိလူမျိုးမိမိတိုင်းရင်းသားများသည် မိဘမဲ့ ကလေးများကဲ့သို့ ဖြစ်နေကာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘ၀နဲ နေလာတာ ဆယ်စုနှစ်တစုနီးပါးခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဒီတိုင်း ဘဲ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှတဘက်နိုင်သောင်းကြမ်သူ ကသည်းသူပုန်များအား ဆက်လက်ကူညီ ပံ့ပူးမည်ဆိုလျင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအတွက် ရင်လေးစရာတွေဆက်လက်ဖြစ်နေအုံးမည်။
နှလုံးသားပုံ ရိ(ဒ်) ရေကန် (သို့မဟုတ်) ချင်းတောင်တန်းပေါ်က အံ့ဖွယ်အလှတရား
ဟားခါးမြို့ရှိ လက်ဝါးကပ်တိုင် ဖယ်ရှားခိုင်းမှု ချင်းလူငယ်များ ကန့်ကွက်
မြေလတ်ဒေသမှသည် အနောက်ဘက် တောင်တန်းများဆီသို့
အိန္ဒိယရောက် ရွှေ့ပြောင်း ချင်းလုပ်သားများ အကာအကွယ်ရရေး လွှတ်တော်တင်မည်